6 အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်များ Accounts ကိုဖွင့်လှစ်ဘို့ - အကြံပြုချက်များနှင့်သိကောင်းစရာများ
ကမှကြွလာသောအခါပြည်သူ့ကွဲပြားခြားနားသောအကွံဉာဏျအများကြီးပူဇော်ပါလိမ့်မယ် အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်။ သူတို့ထဲကတချို့သေချာပေါက်မှားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမဖြစ် - ရွေးချယ်စရာရုံတွေအများကြီးထွက်အဲဒီမှာရှိပါတယ်။ လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်စုံလင်သောဘဏ်လုပ်ငန်းတိုင်းပြည်အခြားများအတွက်အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်မဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြောင်းပြောနေတာစောင့်ရှောက်သောအချို့နိုင်ငံများတွင်သို့သော်ရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌, ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအချို့ကိုလေ့လာစူးစမ်းပါလိမ့်မယ် ကမ်းလွန်ဘဏ် နိုင်ငံပေါင်း - နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့မှာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
အခွန်အကျိုးကျေးဇူးများများအတွက်အကောင်းဆုံးကျေးလက် - ကေမန်ကျွန်းစု
အဆိုပါကေမန်ကျွန်းများ clients များအမျိုးမျိုးမှဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝအကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, တစ်ဦးအားကြီးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတင်းရှိသည်။ အဆိုပါကျွန်းများမှာလည်းအခွန်ဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤသည် Investopedia နိုင်ငံခြားတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာအခွန်တာဝန်ယူမှုကိုကမ်းလှမ်းတဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကလူအမြားစုကရန်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သောနိုင်ငံရေးအရရော, စီးပွားရေးအရတည်ငြိမ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမတိုက်ရိုက်အခွန်ထားရှိခြင်းကေမန်ကျွန်းစုကမ်းလွန်ဘဏ်တစ်ခုတိုးတက်နေတဲ့အရင်းအမြစ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, Cayman.com ကပြောပါတယ်။ မြို့တော်အကျိုးအမြတ်, ကော်ပိုရေးရှင်း, အခွန်ရှောင်, အိမ်ခြံမြေ, လုပ်ခလစာ, ဒါမှမဟုတ်ဝင်ငွေမအခွန်အခများရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်မရှိလဲလှယ်ထိန်းချုပ်မှုမဆိုငွေကြေးအတွက်ကျွန်းများထဲကသို့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းခွင့်ပြုလျက်ရှိ၏။ အဘယ်သူမျှမရံပစ္စည်းလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားအပွားအခွန်ဟေဗန်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Cayman ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းများအတွက်စံပြ destination သည်အဖြစ်သူတို့၏မြင့်ဂုဏ်သတင်းဝင်ငွေအများကြီးပွုပါပွီ။ သူတို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာထိပ်တန်း 10 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစင်တာများတစ်ဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။ ထို့အပြင်ကေမန်ကျွန်းများဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒသူတို့ရဲ့ client များအတွက်လျှို့ဝှက်ဝါကျပါဝင်သည်။ အဆိုပါကျွန်းများသူတို့ရဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုများအတွက်ခိုင်မာသောစည်းမျဉ်းမူဘောင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကယူရိုငွေကြေးစျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
Cayman သိသိသာသာအခွန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပူဇော်ပေမယ့်ဒါဟာသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံအဖြစ်နိုင်ငံအများအပြား, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများအခွန်။
ချမ်းသာကြွယ်ဝဘို့အကောင်းဆုံးကျေးလက် - စင်္ကာပူ
သငျသညျ $ 200,000 သို့မဟုတ်သင်အနေနဲ့ကမ်းလွန်အကောင့်ထဲမှာပယ်ရှားချင်သောပိုရှိသည်ပါသလား စင်္ကာပူကသင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အကောင့်ဖြစ်စဉ်ကိုများသောအားဖြင့်တရားမျှတစွာလွယ်ကူပါတယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သင်သည်အစဉ်အစင်္ကာပူမှခရီးသွားလာခြင်းမရှိဘဲအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်, သီချင်းဆို Sav ရှင်းပြသည်။
ကလူစင်္ကာပူကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့တည်ငြိမ်သော, လုံခြုံရာအရပ်ကဲ့သို့၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဟာသူတို့ရဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စည်းစိမ်ကိုကောင်းစွာကာကွယ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ၎င်းတို့၏ဘဏ်များလည်းအစွန်းနည်းပညာဖြတ်တောက်ပါပြီ။ ဤသည်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဖြစ်သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရန်လွယ်ကူလက်လှမ်းဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
စင်္ကာပူကသင့်ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲဖို့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုစီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှုများ, ရန်ပုံငွေများ, အရစ်ကျအိမ်များနှင့်အကောင့်အမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာစျေးကွက်၏အားသာချက်ယူကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအကွာအဝေးလည်းရှိပါတယ်။ Plus အား, ကသငျသညျအမေရိကန်, ဟောင်ကောင်, တရုတ်, ဥရောပ, နှင့်ပိုပြီးဖို့လမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ Accounts ကိုမြင့်မားတဲ့လဲလှယ်မှုနှုန်း၏လုပ်ရတဲ့လျှော့ချ, ငွေကြေးအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ စင်္ကာပူမှာဘဏ်များလည်းကျွမ်းကျင်စည်းစိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကိုဝင်စား။ ဤရွေ့ကားပညာရှင်များသင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံများအတွက်အကောင်းဆုံးဘဏ္ဍာရေးမဟာဗျူဟာကိုရှာဖွေကူညီပေးနေထံအပ်နှံကြသည်။
ဆွစ်ဇာလန် - ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံ
ဆွစ်ဇာလန်ရှည်လျားပိုက်ဆံဖုံးကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်များ၏တဦးတည်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဂုဏ်သတင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတှကျအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာနိုင်ငံ၏တင်းကျပ်သော privacy ကိုဥပဒေများဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ဟာ Stuff အလုပ်လုပ်ကရှင်းပြသည်မည်သို့ 300 နှစ်အတွင်းပြန်ချိန်းတွေ့ကြ။ ဆွစ်ဇာလန်ဥပဒသည်သင်၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲသင့်အကောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းထံမှဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတားမြစ်ခဲ့သည်။ ဤပညတ်တရားကိုချိုးဖောက်သူကိုဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေထောင်ထဲမှာခြောက်လအထိရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အာဏာပိုင်တွေဆွစ်ဖရန် 50,000 သူတို့ကိုတက်ဒဏျကွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ privacy ကိုတရားတစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြုမူသောအမှုကိစ္စ၌တည်ရှိ၏။ Plus အားတစ်ဦးတစ်ချိန်ကနှစ်စဉ်အခွန်ရှောင်မှုကိုရှောင်ရှားရန်နိုင်ငံခြားငွေအခွန်အာဏာပိုင်များထံသတင်းပို့လည်းမရှိ။
အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်ကိုသင့်အိမ်တိုင်းပြည်ကနေသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြတ်တောက်သွားပါသည်; နှင့်၎င်း၏တရားရုံး။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကကမ်းလွန် LLC သို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုအတွက်သင့်အကောင့်ကိုကိုင်ထားရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဆွစ်ဇာလန်အတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုဥပဒေများပေါင်းကွတ်ကျွန်းစုများသို့မဟုတ်နေးဗစ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေများကိုဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ပါစေ။
ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်ဘဏ်အဖြစ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ကျော်ကြားမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာနောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုအနိမ့်စွန့်စားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်၎င်း၏လုံခြုံရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးရာသီဥတုတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ ဆွစ်ဇာလန်သည် Bankers အသင်း (SBA) ကိုဘဏ်များထိန်းညှိ။ ဆွစ်ကုမ္ပဏီရှိသူများအမြတ်အစွန်းရရှိမပါဘူးဆိုရင်ဆွစ်ဇာလန်, စိတ်ဝင်စားမှု, ခွဲဝေသို့မဟုတ်အမွေကိုမအခွန်အခများကောက်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်ဥပဒေကဲ့သို့ကောင်းစွာမြင့်မားသောမြို့တော်လုံလောက်မှုတောင်းဆိုနေပြီ။ 2004 ၏သကဲ့သို့, SBA အဆိုပါငွေထုတ်ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသဘောတူညီချက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော။ ဒါဟာသဘောတူညီချက်ဘဏ်ပျက်ကွက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ငွေထုတ်နေဆဲသူတို့ရဲ့တရားဝင်အခွင့်ထူးခံတောင်းဆိုမှုများကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံပါသည်။
ကုမ္ပဏီများအဘို့အကောင်းဆုံးကျေးလက် - နေးဗစ်
သငျသညျကမ်းလွန်သင့်ကုမ္ပဏီရွှေ့ဖို့ရှာနေလျှင်, နေးဗစ်ဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းဘာကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများ 70% နှင့် ပတ်သက်. ဖွဲ့စည်းဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကျွန်းများမှများစွာသောလူ lures သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပြဌာန်းချက်, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းထက်ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထုံးအဖှဲ့, ထိုနာဗိစ် LLC များအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်သည်။ နေးဗစ်ကုမ္ပဏီများသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အဆောက်အဦများရှိသည်နှင့်အလွန်နည်းပါးပြဌာန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်။ မရှိအပိုဆောင်းအခွန်အခများသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်မြင့်သောစံနှုန်းများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
နေးဗစ်ကုမ္ပဏီများသည်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များနှင့်ရောနှောရှယ်ယာရှင်များ / LLC အဖွဲ့ဝင်များအဘို့ကြီးသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီများသည်အခြားတရားစီရင်မှုမှသို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့အဖြစ်ခိုင်မာအောင်သို့မဟုတ်အခြားနေးဗစ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ပေါင်းစည်းနိုင်ပါ။ ရှယ်ယာမြို့တော်ရှိသည်ဖို့နေးဗစ်ကုမ္ပဏီများမှလိုအပ်ဘယ်တရားမျှမပါပဲ။ Plus အား, ခွဲဝေကုမ္ပဏီရဲ့ဒါရိုက်တာတို့ကကြေငြာနိုင်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များအကာအကွယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိသည်နှင့်တစ်ဦးမျှတသောတန်ဖိုးကိုမှာကုမ္ပဏီပိတ်ပြီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်နေးဗစ်ကုမ္ပဏီများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစတော့ရှယ်ယာဖလှယ်မှုအပေါ်၎င်းတို့၏ရှယ်ယာများကိုစာရင်းပြုစုနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်မှာ NASDAQ, လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း, နိုင်ငံတကာ Securities Exchange နှင့်ထို့ထက် ပို. ပါဝင်သည်။
BVI ဤကဏ္ဍတွင်ယခင်ရရှိသွားခဲ့သည်။ သို့သော် overburdensome စည်းမျဉ်းနှင့်တကွ, အင်အားကြီး-ကြောင်း-ဖြစ်ထိထိရောက်ရောက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များအတွက်ဧရာမ "သွား" နိမိတ်စိုက်ထူခဲ့ကြသည်။ မျှော်လင့်သူတို့နောက်ဆုံးတော့နိုးနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကတခြားရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပါးရည်နပ်ရည်တစ်ဦး inkling ရှိသည်သောသူတို့နှင့်အတူလက်ရှိအားပြိုင်မှုကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ဟောင်းတဦးတောက်ပပြန်လည်ပေးနိုင်သည်။
အတိုးနှုန်းမြင့်မြင့်အဘို့အကောင်းဆုံးကျေးလက် - ဘေလီဇ်
သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်အတိုးနှုန်းကိုရှာဖွေပါကဘေလီဇ်ကြောင်းစာရင်းတွင်မဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဖွယ်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအစားသင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးတစ် 20% အတိုးနှုန်းတက်ဂုဏ်ယူရသောယူကရိန်းကဲ့သို့နိုင်ငံများတွင်ပြသပေလိမ့်မည်။ လက်ျာဘက်, ကောင်းသောအသံ? သငျသညျငွေကြေးဖောင်းပွခြင်းနှင့်ဘဏ်လုံခြုံရေးနှင့်တူသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်အထိဒါဟာပါဘူး။ ယူကရိန်းအတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွမှု 49% ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက Go ကိုဘဏ်လုပ်ငန်းနှုန်းနှုန်းကတော်တော်နိမ့်အစစ်အမှန်အတိုးနှုန်းပေး 29% တစ်ခုကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါယူကရိန်းနှစ်ခုအဓိကပြဿနာများရှိပါတယ်: ကငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ယူကရိန်းရဲ့ငွေကြေးစနစ်များအတွက်အချက်အချာကျဆင်းနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံကအရမ်းလုံခြုံမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတယ်, သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကြောင်းကောင်းတဲ့ 20% ပြန်လာမမြင်ရပေလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဘေလီဇ်? ဒီအရေးအသားကဘေလီဇ်အကြောင်းကို 2.54% ၏အမှန်တကယ်အတိုးနှုန်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်လယ်ပိုင်း0နှုန်းထရေးဒင်းစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အဖြစ်% 2019 နီးစပ်သူတစ်ဦးကငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းမှာရှိပါတယ်။ ဒါကအမေရိကန်နှင့်ကနေဒါအပြင်, ဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့အခြားနိုင်ငံများတွင်ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားပါတယ်။ မ 20% ရဲ့သော်လည်းဘေလီဇ်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်တွေအများကြီးနဲ့တည်ငြိမ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ Lan Sluder Belizean အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကောင့်ဒေသခံအခွန်သို့မဟုတ်လဲလှယ်ထိန်းချုပ်မှုကန့်သတ်နိုင်ဖို့ဘာသာရပ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုရှင်းပြထားသည်။ အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူအရှိဆုံးအဓိကငွေကြေးထဲကနေရှေးခယျြနိုငျပွီးဘေလီဇ်နှင့်အမေရိကန်အကြားလဲလှယ်မှုနှုန်း2ဖြစ်ပါသည်: 1 ။ တိုင်းပြည်ကိုလည်း၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏ privacy ကိုလေးစားလိုက်နာဘို့လူသိများသည်။ ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိဒေသခံ clients များ - ထို့ပြင်, Belizean အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်များသာသူတို့ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖောက်သည်ဖြည့်တင်း။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက်အကောင်းဆုံးကျေးလက် - ဂျာမဏီ
အလုံခြုံဆုံးဘဏ်များ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးရဲ့လတ်တလောစာရင်းထဲတွင်, ဂျာမနီရဲ့ဘဏ်များ၏တဦးတည်းနံပါတ်တစ်နေရာမှာရှိပါတယ်။ ဂျာမဏီ 50 များ၏စာရင်းထဲတွင်ခြောက်လုံးစုစုပေါင်းအဘို့, ထိပ်တဆယ်သုံးသည်အခြား slot နှစ်ခုရရှိထားပါသည်။ ငွေပေးချေတစ်ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ, ဂျာမနီနောက်ကွယ်မှကြီးတွေအကြောင်းပြချက်ကမ္ဘာ့လုံခြုံမှုအရှိဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်များများအတွက်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ခြင်းဝေမျှပေးသည်။ သူတို့ကတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆင့်ဆိုရမည်မှာ, အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးအရ။ ဒါဟာငွေစု, စစ်ဆေးခြင်းကိုနှင့်ချုပ်နှောင်ထားအကောင့်တစ်ခုလူကြိုက်များအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမဏီခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကတည်းကအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ, 24 /7အွန်လိုင်း Of-The-Art ပြည်နယ်နှင့် ATM စက်များန်ဆောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်, သင်ဂျာမနီမှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ထို့အပြင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များများသောအားဖြင့်တရားမျှတစွာအနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ တချို့ကဘဏ်များလည်းအဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့ဗီဇာသို့မဟုတ် MasterCard ကိုခရက်ဒစ်ကဒ်ရတဲ့၏ထို option ပေးပါ။ သငျသညျခရီးမှချစ်ကြလျှင်အကျိုးကျေးဇူးများပင် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ ယူရိုအတွက်အကောင့်တစ်ခုရှိခြင်းဥရောပတစ်လျှောက်လုံးအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ဆိုလိုသတည်း။ Plus အားအချို့သောဘဏ်များမကြာခဏခရီးသွားများအတွက်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးရှိသည်။
သငျသညျသို့သော်သင်သည်နောက်ကြွလာမယ့်တရားစွဲဆိုမှုရှိပါကဒါဟာကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဂျာမဏီနိုင်ငံခြားရေးတရားစီရင်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းရန်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်လျှင်တခြားနေရာသွားပါ။
အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာမဆိုတဦးတည်းအတွက်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်တိုင်းပြည်နှင့်ဘဏ်အားဖြင့်အခက်အခဲနှင့်စရိတ်အတွက်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုနောက်ခြေလှမ်းကိုယူနှင့်သင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အဆင်သင့်ပါပဲရှိပါသလား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏တဦးတည်းစကားပြောအခမဲ့ခံစားရသည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့အကောင့်ထဲကအများဆုံးရတဲ့နေသေချာအောင်နိုင်ပါတယ်။ Plus အားကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသင်သင့်လျော်သောအခွန်ဥပဒေများတွင်အောက်ပါသေချာဖြစ်ရန်သင့်စာရင်းကိုင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Investopedia အနေနဲ့ကမ်းလွန်အကောင့်ဖွင့်သည့်အခါစိတ်တွင်ထားရန်အချို့သောအပိုဆောင်းသောအရာတို့ကိုပေးထားပါတယ်။ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုသင့်အိမ်နိုင်ငံတွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်အလားတူဖြစ်သွားကြသည်။ သငျသညျမွေးဖွား, လိပ်စာ, နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နှင့်အလုပ်အကိုင်၏, သင့်အမည်, ရက်စွဲတူသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအဘို့တောင်းပါလိမ့်မယ်။ အင်အားအကောင်းဆုံး privacy ကိုဥပဒေများနှင့်အတူတောင်မှနိုင်ငံများတွင်ဒီမေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်အကောင့်ဖွင့် setting အခါဘဏ်ကသင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန်နိုငျကွောငျးအရေးကြီးပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏အကောင့်အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တချို့ကစာရွက်စာတမ်းများကိုအောက်ပါပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ သူတို့ဟာဖွယ်ရှိသင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် / သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်လိပ်စာ၏သက်သေများ၏မိတ္တူကိုတောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်များစွာသောအဖွဲ့အစည်းများသည်သင်၏လက်ရှိဘဏ်အနေဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးရည်ညွှန်းစာရွက်စာတမ်းများကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအကောင့်ကိုရှောက်သွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ anti-ငွေကြေးခဝါချမှုစည်းမျဉ်းများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဘဏ်များတစ်စုံတစ်ဦးကိုတရားမဝင်လုပ်ငန်းများအတွက်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနေခြင်းမရှိပါသေချာအောင်ချင်တယ်။
နိဂုံး - မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဘဏ်မှရှာဖွေခြင်း
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမ-size-ကိုက်ညီတဲ့-အားလုံးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ဘယ်မှာတိုင်းပြည်ရွေးချယ်ရာတွင်မှကြွလာသောအခါများစွာသောရှေးခယျြမှုရှိပါတယ်။ နိုင်ငံအားလုံးသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာထက်ကျော်လွန်အကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ "မှာအကောင်းဆုံး။ " တချို့ပြည်တွင်းဘဏ်များထက်ပိုမိုမြင့်မားအတိုးနှုန်းပေးဆောင်။ သင်မှန်ဖြစ်သောတိုင်းပြည်ထွက်ရှာပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏တဦးတည်း၏အကူအညီကိုရှာပေးနိုင်သည်။ ဒီစာမျက်နှာပေါ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပုံစံသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပါ။ သင်တို့သည်ဤနည်းလမ်းများထဲကတစ်ခုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထိုအခါသင်သည်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးင်သောကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပေါ်စတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးရုပ်ပုံများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှကြွလာနှင့်သင့်ကာကွယ်မှုစီစဉ်သည့်အခါစိတ်တွင်ဤအကြံပြုချက်များကိုစောင့်ရှောက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျသာအလုံခြုံဆုံးနှင့်လုံခြုံမှုအရှိဆုံးဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများချင်တယ်။ သင်ရွေးချယ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အပေါ် မူတည်. ဒီအဖွဲ့အစည်းကတည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုအတွက်အစွမ်းကုန်ပူဇော်ကြောင်းလုံခြုံကမ်းလွန်ဘဏ်များနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ဘဏ်အများအပြားဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းများရည်ညွှန်း။ သူတို့ကငွေထုတ်မယ့်အိမ်ကတိုင်းပြည်ထက်အခြားနိုင်ငံများနှင့်တရားစီရင်မှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အထက်ပါသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့်အခါနည်းပညာပိုင်းမျှကမ်းလွန်ဘဏ်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါ။ ထိုမှတပါး, ပညာရှင်များယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကငွေထုတ် privacy ကိုအဘို့အမြင့်မားသောကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. ရှိသည်ဘယ်မှာတည်ရှိသောဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများအဘို့ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုရှိသည်။
သူတို့ရဲ့ဇာစ်မြစ်, ကမ်းလွန်ဘဏ်များကတည်းကမတရားရောနှောနှစ်ဦးစလုံးမီဒီယာနှင့်အိမ်တရားစီရင်မှုအားဖြင့်ပုံဖော်ခံရဖို့တော်မှာ။ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်အခွန်ရှောင်မှုကိုထံမှငွေကြေးခဝါချမှုအရွယ်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့်သတိထားကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များ၏စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်ဆန်းစစ်။ ထိုအခါတရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကိုအမှန်တကယ်ကျင်းပသို့မဟုတ်ရှိရာဆနျးစစျဖို့အချို့သောဘက်မလိုက်သုတသေနပွု "laundered ။ " ဒီအခြေအနေအပေါ်အချို့သောအလင်းကိုသွန်းပါလိမ့်မယ်။ အခွားသောအယူမှားစွပ်စွဲစသည်တို့ကိုမလုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်မှာ, ဆင်းရဲသောစည်းမျဉ်းများ၏ဝေဖန်မှုတဝိုက်ဗဟိုပြုပါပြီ
နောက်တဖန်ဤဝေးတဲ့အမှန်တရားကနေမဖွစျနိုငျတယျ။ မဆိုဂုဏ်သတင်းအများစုမှာကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်တရားစီရင်မှုအလွန်ခေတ်မီဆန်းပြား, တည်ငြိမ်ဘဏ်လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ကငွေထုတ်ဆွဲဆောင်ထားရန်သူတို့၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအာဏာပိုင်များကငွေထုတ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အစည်းအဝေးဆီသို့ဦးတည်သည်ဤစည်းမျဉ်း Gear ။ ဤအတရားစီရင်မှု၏အတော်များများဟာသူတို့ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးအချက်အဖြစ်၎င်းတို့၏ဘဏ်များတှငျကငျြးပခဲ့နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်းအပေါ်အားကိုး။ Plus အားဤဘဏ်များကိုမကြာခဏနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသူတို့ရဲ့အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်များ၏ကျယ်ပြန့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အဆိုပါငွေထုတ်သူသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနေထိုင်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်နိုင်ငံမှာတည်ရှိပါတယ်ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုင်ထား၏များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ခုမှာသူတို့များသောအားဖြင့်အခွန်ဟေဗန်တည်ရှိသောနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ Plus အား, သူတို့ဘဏ်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူမှသိသိသာသာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လျှို့ဝှက်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးကြောင်းဥပဒေများရှိသည်။ ဤရွေ့ကားတရားစီရင်မှုလည်းမကြာခဏကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်အမျိုးအစားများမှလေးစားမှုနှင့်အတူကန့်သတ်တစ်ခုအပန်းဖြေဘို့ခွင့်ပြုပါ။ ငွေထုတ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှစွန့်စားမှုကန့်သတ်ပေးသောစည်းမျဉ်းများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်အားပြိုင်မှုကိုဘယ်လိုဘဏ်လက်ကိုင် dictate နှင့်အမြင့်ဆုံးငွေထုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်ရန်ပုံငွေများတွက်ချက်။ by နဲ့ကြီးမားတဲ့သို့သော်ဥပဒေစည်းကမ်းငွေထုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပေးချင်တယ်။ ဒါကငွေထုတ်အပေါ်စည်းမျဉ်းလျော့နည်းသွားဖို့ပမာဏသည်။
ပိုမိုလူကြိုက်များကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုမကြာခဏအခွန်တာဝန်ယူမှုအတွက်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်နိုင်ငံသားများ၏အခွန်များထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်ကဲ့သို့အချို့နိုင်ငံတွေအတွက်သူတို့က, သွားရမည်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ငါတို့သည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားအဖြစ် quantifiable အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသက်သေပြသူတွေကိုသာအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားကမ်းလွန်ဘဏ်များဖြစ်သော Cayman သို့မဟုတ် Channel ကိုကျွန်းများအဖြစ်အမှန်တကယ်ကျွန်း-ပြည်နယ်များမှာတည်ရှိပါတယ်နိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောဆွစ်ဇာလန်အဖြစ်ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံများရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်တရာတစ်နှစ်ကျော်များအတွက်အခွန်ဆိပ်ခဲ့ပြီ - နှင့်ကျွန်းလူအမျိုးမျိုးထက်ပိုရှည်။
ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်များ၏ privacy ကိုနှင့် ပတ်သက်. အများကြီးစကားများသောရှိခဲ့သည်။ သငျသညျသို့သော်ကိစ္စများရှိခဲ့ဘူးသောသာဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်များဆွစ်ဇာလန်၏အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိကိုင်းအခက်နှင့်အတူရှိသူများဘဏ်များဖြစ်ကြသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ Credit Suisse နဲ့ UBS သိသိသာသာအမေရိကန်ရှိနေခြင်းရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အမေရိကန်အားပြိုင်မှုသည်ဤဘဏ်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ သက်သက်သာဆွစ်ဇာလန်တည်နေရာနှင့်အတူသူများသည်ခိုင်မာတဲ့ privacy ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွင့်စာပိုဒ်ထဲမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်နဲ့ဆက်စပ်နားလည်မှုလွဲမှားနှင့်ဒဏ္ဍာရီ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်များငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ရာဇဝတ်သားများ၏ Haven ဖြစ်ပါသလား ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့ဤ website တွင်ဘဏ်လုပ်ငန်းဒဏ္ဍာရီအပိုင်းကိုဖတ်ပါ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားသင့်ကြောင်းကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဒဏ္ဍာရီအပေါ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ရှိသည်။
ဒါဟာတစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်သုံးစွဲဖို့ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါသင်သင့်လျော်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို select အရေးကြီးပါသည်။ ကမ်းလွန်တရားစီရင်မှု၏အများစုသမ္မာသတိရှိသော, အသံစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ သူတို့ကသိုက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဦးတည်ရည်ရွယ်သောအရပ်၌ရှိကြ၏။ သို့သော်အချို့ဒီတော့ထွက်လျှို့ဝှက်ချက်များအတွက်အခြားသူတွေစဉ်အခွန်ကောက်ခံမှုမှာသူတို့ရဲ့အကြိုးခံစားခှငျ့အလေးချိန်နှင့်။
ထိုလူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လျှို့ဝှက်နှင့်လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်ပူဇော်သော်လည်းကဘဏ်လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဖျောပွဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသမုတ်သော။ ထိုအခါသင်သည်အညီအဆိုပါတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ။ ကမ်းလွန်တရားစီရင်မှု၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့လူနည်းစုသူတို့ရဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထိန်းညှိဆင်းရဲအလုပ်အကိုင်များလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့်အသိပေးထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသို့မဟုတ်အကြံပေးသူတို့ကိုယ်သူတို့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ client များအတွက်မသင့်တော်တဲ့အတိုင်းဒီယူဆပါသည်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်ဤအညံ့ဖျင်းစည်းရုံးပြီး run တရားစီရင်မှုမကြာခဏတရားမဝင်ငွေထုတ်ခြင်းဖြင့်ခြယ်လှယ်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကငွေကြေးခဝါချမှုများသို့မဟုတ်အခြားရာဇဝတ်မှုလှုပ်ရှားမှုရှာဖွေနေသည့် FATF (Financial Action Task Force) ၏လွယ်ကူသောပစ်မှတ်သက်သေပြ။
ဤတွင်အပေါ်တစ်ဦးဆက်စပ်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကေမန်ကျွန်းများဘဏ်များ နှင့်အပေါ်အခြား
ဘေလီဇ်ဘဏ်လုပ်ငန်း။ ဤတွင်, ဤနှစ်ခုလူကြိုက်များတရားစီရင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကမြင်လိမ့်မည်။
ဒါဟာဥရောပတိုက်သားကအမြဲအတော်လေးလေးလံအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည့်ကံဆိုးအချက်ဖြစ်ပါသည် အခွန် ထမ်းရွက်။ ကတိုက်ကြီးပေါ်ခဲ့တာဒီအရာကဗြိတိန်ကျွန်းပေါ်အဖြစ်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥရောပတိုက်သားကသူတို့ကြိုးစားပမ်းစားရရှိခဲ့သည်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စည်းစိမ်နုတ်မစောင့်ကြည့်၏အလားအလာကိုနှငျ့ရငျဆိုငျခဲ့ကြသည်။ အခှနျခံရဲ့လက်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဆုပ်ကိုင်မိမိတို့ဥစ္စာကိုလုယူကြ၏။ ထို့ကြောင့်တိုက်ကြီးအဖြေတစ်ခုအဘို့အသီးမှည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုအခါအဖြေတစ်ခုရောက်လာတယ်။ အဆိုပါ Channel ကိုကျွန်းများအဖြစ်လူသိများအဆိုပါသေးငယ်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြည်နယ်တစ်ခုစိတ်ကူးနှင့်အတူတက် လာ. ။ သူတို့ကသိုက်က၎င်း၏ဘဏ်များထဲတွင်နေရာဤစိတ်ပျက်ငွေထုတ်စိစစ်မှအခမဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်; ဤအရပ်မှ, ထိုမိုးသည်းထန်စွာလက်အခွန်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး။ ဤရွေ့ကားအကြိုးကြေးဇူးမြားအမြားအပွားချမ်းသာတဲ့ဥရောပတိုက်သားယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။ မကြာခင်မှာပဲဒီဝန်ဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ အခြားအသေးငယ်တဲ့တရားစီရင်မှုမှတ်ချက်ကိုယူ။ သူတို့ကလည်းနိုင်ငံခြားအရင်းအနှီး-ဆွဲဆောင်သံလိုက်မှပါးရည်နပ်ရည်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူတို့ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများပြင်ဆင်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံများတစ်ဦးကလက်တဆုပ်စာသောအသံ, လက်တွေ့ဘဏ်လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ငွေထုတ်၏အလားအလာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေလျှော့ပေး။ အဆိုပါကမ်းလွန်ဘဏ် start တစ်ပြေးဖို့ချွတ်ပဲ!
မကြာမီဟူသောဝေါဟာရကို "ကမ်းလွန်ဘဏ်" ဆိုသေးငယ်, ဆိပ်တရားစီရင်မှုနှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူတို့ကလက်တွေ့ကျသောစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူလုံခြုံ, လုံခြုံ, လျှို့ဝှက်ဘဏ်လုပ်ငန်းပူဇော်ကြ၏။ မကြာခင်မှာပဲကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာ "ဟုသိပါ။ " ခဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလားအလာဖြေရှင်းချက်အတိုင်းဤကမျးနားမှာကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ စသည်တို့ကိုအမေရိကန်များ, အာဖရိကန်, အာရှသား, အကြောင်းပြချက်တစ်ခုများပြားလှသောဤကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်အတော်လေးအသုံးဝင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အိမ်မှာသူတို့ရဲ့ဘဏ်များနှင့်မတူဘဲဤကမ်းလွန်ဘဏ်များကိုမှန်မှန်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးခိုက်ရန်အကြောင်းမဲ့မခံခဲ့ရပါ။ အများစုမှာပညာတတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတို့သည်မိမိတို့နိုင်ငံရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကြိုးခံစားခှငျ့အတှကျသူတို့ကိုသိသည်။
နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်သူတို့ သာ. ကြီးမြတ်အသုံးပြုမှုသို့ရောက်နှင့်အရှင်ပိုပြီးမြင်နိုင်ပါပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, မီဒီယာမတရားနိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းအကောင့်ပုံဖော်ထားသည်။ Plus အား, အပိုကြီးတဲ့တရားစီရင်မှုပြစ်မှုဆိုင်ရာမြေအောက်၏ stomping ခိုင်ခိုင်လုံလုံအဖြစ်သူတို့၏ဂုဏ်သတင်းဖျက်။ ဤရွေ့ကား High-အခွန်သောလူမျိုးတို့နှင့်မြင့်မားအခကြေးငွေဘဏ်များလုပ်သမျှ-ရရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်တကယျ့ဆိပ်အဖြစ်သူတို့ကိုဖော်ကျူး။ သူတို့ကပိုက်ဆံ-ခဝါချမှုအစီအစဉ်များအဘို့ရှေးခယျြမှုဒေသမူများကဲ့သို့သူတို့ကိုပန်းချီကြိုးစား။
ပိုက်ဆံပညာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ငွေထုတ်ရှည်လျားသည်ဤစွဲအမှန်တရားကနေနောက်ထပ်မဖွစျနိုငျသိရပါပြီ။ သူတို့ကကမ်းလွန်ဘဏ်များပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်သိသိသာသာထိရောက်သောဟေဗန်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံ, လုံခြုံ, လျှို့ဝှက်၏လိုအပ်ချက်အတွက်ရန်ပုံငွေများအတွက်ရဲတိုက်အဖြစ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကဤဘဏ်များဟာသူတို့ရဲ့ရန်ပုံငွေကာကှယျစောငျ့ရှောကျနိုငျကွောငျးကိုငါသိ၏။ ဒါကသူတို့ရဲ့နေအိမ်နိုင်ငံများရှိ, အရပ်ဘက်စီးပွားရေး, သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးခိုက်ရန်၏ဘေးကနေပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအမိုးအကာ, ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ကမ်းလွန်ရေနံဘဏ် bargain ၏သူတို့၏အဆုံးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆက်လက်။ သူတို့ကဘေးကင်းလုံခြုံ, လျှို့ဝှက်ဟေဗန်များကိုဆက်လက်။ သူတို့ကအစိုးစည်းမျဉ်းများနှင့်အခွန်၏ဘေးထံမှရန်ပုံငွေများစောငျ့ရှောကျဖို့ရှာဖှသေူမြားအတှကျသရဏဂုံသည်။
အတော်များများဟာတှေးငွေထုတ်ပု, လုံခြုံလျှို့ဝှက်နှင့်အနိမ့်အခွန်ကောက်ခံခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ကနေအကျိုးသိရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကမ်းလှမ်းရန်အဘယျသို့ရှိပြီးအရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့် unchartered ရေထဲသို့ခုန်ရှေ့တော်၌အရည်အချင်း, အတွေ့အကြုံရှိအေးဂျင့်နှင့်အတူသူတို့ကိုဆွေးနွေးရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ထူထောင်ပေးအများအပြားခဲ့ကြကြောင်းလည်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ တာဝန်ယူမှုများနှင့်လျှို့ဝှက်ကနေကာကွယ် featuring အလားအလာဘဏ်လုပ်ငန်းတည်နေရာပေးဘို့ငွေထုတ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြားကသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ထို့အပွငျကမ်းလွန်ဘဏ်များပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, (သင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်. ) အခွန်လျှော့ချခြင်းနှင့်ထိပ်တန်းတီလျှို့ဝှက်ချက်များအဘို့ဤခက်ခဲ-ရရှိခဲ့သည်ဂုဏ်သတင်းကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
> ကျအခနျး 8 မှ